Fast and the Furious ဇာတ်လိုက်တွေကသာ Free Fire ကားတွေကို မောင်းမယ်ဆိုရင်... | Codashop Blog MM
Home Games Free Fire Fast and the ...
Fast and the Furious ဇာတ်လိုက်တွေကသာ Free Fire ကားတွေကို မောင်းမယ်ဆိုရင်…
Free Fire မှာ ပစ်ခတ်တာတွေနဲ့ တစ်ခြားအရာတွေကလွဲရင် Booyah ကိုရဖို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် သွားလာတတ်ဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ Heist အောင်မြင်ဖို့က အရမ်းအရှိန်မြန်တဲ့ ပြိုင်ကားတွေတို့ Monster Truck ကားတွေတို့၊ versatile amphibious တို့လိုမျိုး ကားတွေလိုပါတယ်။
ကဲ ဒီလိုစဥ်းစားကြည့်ရအောင်။ တစ်ခြား ကမ္ဘာမှာ Dominic Toretto နဲ့ သူ့အဖွဲ့တွေက ဂိမ်းထဲကို ရောက်လာရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ? ဘယ်သူက ကားမောင်းတာကိုတာဝန်ယူမယ်ထင်လဲ? ကျွန်တော်တို့ ​ဒီ “Free Fire & Furious”​အကြံကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောမယ်နော်။ ဒီအကြံတွေကတော့ ဂိမ်းထဲမှာ သုံးတဲ့ ကားတွေကိုဘဲ အခြေပြုထားတာပါနော်။
အမြင့်ဆုံး အရှိန် : 112 km/h
ဘာလို့ Roman Pearce ကို Monster Truck ပေးလဲဆိုတာ သိချင်လား? သူကပါးစပ်မလုံတဲ့သူတစ်ယောက်ဆိုတာ Brian ကိုယ်တိုင်ကိုကပြောလို့ပါ။ Monster Truck ကတော့ ကုန်းမြင့်တွေလို ကြမ်းတမ်းတဲ့လမ်းတွေမှာ သုံးဖို့ အသင့်တော်ဆုံးပါဘဲ။ ၄ ယောက်ထိုင်နိုင်ပြီး ကောင်ကောင်းအကာအကွယ် ပေးပါတယ်။ Roman က Rico နဲ့ Tego တို့ကို ခေါ်ပြီးစီးနိုင်သလို Ramsey နဲ့ ဒိတ်သွားရင်လည်း စီးနိုင်တာပေါ့။
Roman က 2011 Bugatti Veyron ၊ 2010 Bentley Continental GT Vorsteiner BR9 Edition ၊ 2018 Acura NSX တို့လို စျေးအကြီးဆုံး နဲ့ ပြောင်လက်နေတဲ့ ကားတွေကို ဘဲစီးတတ်တာ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက နမော်နမဲ့နိုင်လို့ Monster Truck ကဘဲသူနဲ့ အကိုက်ညီဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်။ Roman က Airdrop ထဲကို အရင်ဆုံး၀င်ပြီး Truck ရဲ့ ပထမဆုံး Dib ကိုရယူ​ရမှာပါ။ သူက ပျံရတာတို့ ပြုတ်ကျတာတို့ကို မကြိုက်ဖူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ အားလုံးသိပါတယ်။ ဒါကို ရွေးလိုက်တာကတော့ အားလုံးလဲ ရီရအောင်လို့ပါနော်။ Roman အတွက်တော့စိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ဗျာ။
အမြင့်ဆုံး အရှိန် : 130 km/h
“The Rock ကဘာကို မောင်းနေလဲ ဆိုတာသင်မြင်ရလား?” Hobbs က ဒီ အဖွဲ့ထဲကို နောက်ကျမှ ၀င်ပေမယ့် Gurkha LAPV ၊ Navistar MXT ၊ Land Rover Defender နဲ့ ဆေးရုံကားတို့လို အကြီးဆုံးနဲ့ အခိုင်ခံ့ဆုံးကားတွေကို မောင်းလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုဘာလို့ သူ့ကို Monster Truck မပေးတာလဲ?
ကဲ ဒါလေးကို ကြည့်လိုက်ရအောင်။ သူက လူကောင်ကြီးတော့ သူ့ကို ပညာစမ်းတဲ့အနေနဲ့ Body သေးတဲ့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လေးကို ပေးလိုက်တာပါ။ HP လဲ နည်းတော့ Hobbs က ဘယ်လို ကျဥ်တွေ​ရှောင်ပြီး အသက်ရှင်အောင်နေမလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ရတော့ စိတ်၀င်စားဖို့ကောင်းမှာပါ။ သတင်းကောင်းကတော့ မော်တော်ဆိုင်ကယ်ကမြန်တော့ Owen Shaw ကို ဖမ်းနိုင်ဖို့ အခွင့်ကောင်းပါဘဲ။ သစ္စာဖောက် Gina Carino ကိုလဲ နောက်ခုံမှာတင် ဖမ်းပြီး ထောင်ထဲကို တန်းပို့လို့လဲရတာပေါ့။
အမြင့်ဆုံး အရှိန် : 113 km/h
Tokyo က ပြဿနာပေါင်းစုံနဲ့ သိပ်ဆိုးတဲ့ Sean Boswell ပါ။ သူဖြေရှင်းရမယ့် ပြဿနာကတော့ ဒီဟောင်းနေတဲ့ Jeep ကားကို ဘယ်လို အဆင့်မြှင့်မလဲဆိုတာပါဘဲ။ သူက Auto Machines တွေကို အရမ်းသုံးတတ်တာကို ကျွန်တော်တို့ အားလုံး သိပါတယ်။ ဒီတော့ 1967 Ford Mustang Fastback ကလို Sunny Kalhari ကနေ ဘယ်လို ခိုးယူပြီး Drift Power တွေသုံးမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တို့ အရမ်းသိချင်ပါတယ်။
ဒီ Jeep က မနှေးမမြန်အရှိန် နဲ့ Defense မှာဆိုမဆိုးပါဘူး။ ၄ ယောက် အထိ စီးနိုင်လို့ Twinkie (Bow Wow) ၊ သူ့ရဲ့ ချစ်သူ Neela နဲ Han တို့ကို တောင် နောက် Drift Challenge တွေ ရှာရင်း တင်စီးနိုင်ပါတယ်။ သူက Toretto ကို Jeep နဲ့ Bermuda တစ်လျှောက်ပြိုင်နိုင်ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ အရမ်း အံ့သြရမှာပါ။
ပြိုင်ကား (Sports Car)
အမြင့်ဆုံး အရှိန် : 160 km/h
Dom ဒါမှမဟုတ် Brian ကို ဘာလို့ Free Fire ကားတွေ မပေးသေးသလဲဆိုပြီး သင် စဥ်းစားမိပါလိမ့်မယ်။ ဒါကတော့ တစ်ခြားသူတွေကို အရင် အခွင့်အရေးပေးချင်လို့ပါ။ သူတို့ နှစ်ယောက်က ကားတိုင်းကို ကောင်းကောင်းကို မောင်းနိုင်မှာပါ။
ဇာတ်လမ်းဆက်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Toretto တစ်ယောက်ဖြစ်ပေမယ့် Mia က နောက်ကွယ်မှာဘဲ နေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ကို ကျွန်တော်တို့က ပြိုင်ကားပေးတာပါ။ သူက Acura နဲ့ Supra ကို ရင်နှီးနေတော့ ဒီလို မြန်ဆန်တဲ့ကားကို ကောင်းကောင်းသုံးနိုင်မှာပါ။ သူက ပြိုင်ကားကို သုံးပြီး Brian​ ဘယ်ရောက်နေတယ်ဆိုတာကို ညာနေလားသိရအောင် လိုက်ချောင်းနိုင်ပါတယ်။ နောက်တာပါ ဟိဟိ။ Mia နဲ့ ပြိုင်ကားက အရမ်းလိုက်ဖက်ပြီး Airdrop တွေရအောင်၊ သေးလာနေတဲ့ Circle ကနေ ထွက်ပြေးနိုင်အောင် သုံးနိုင်ပါတယ်။
အမြင့်ဆုံး အရှိန် : 156 km/h
Purgatory မှာ တစ်ခုခုလွဲချော်ပြီး အဖွဲ့၀င်တွေတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် သူတို့ရဲ့ အလောင်းတွေကိုလိုက်ကောက်ဖို့အတွက် Han ကို ဒီ Pick Up Truck ပေးမှာပါ။ အရှိန်မနှေးမမြန်ရှိပြီး Defense ကောင်းတာ နဲ့ စတီယာတိုင် Angle လဲကောင်းပါတယ်။ ဒီ Free Fire ရဲ့ ပင်တိုင်ကားဟာ Han ဖို့ အရမ်းအကျိုးရှိမှာပါ။
နံပါတ် (၁) အနေနဲ့ ရုပ်ရှင်တော်တော်ကြာတဲ့အချိန်၊ အာလူးကြော်တွေတော်တော်ကုန်သွားတဲ့အချိန်အထိ သူကရှင်သန်နေမှာပါ။ နံပါတ် (၂) ကတော့ Truck ရဲ့ နောက်ခန်းကို သုံးပြီး Giselle ကို Demise ကနေ ပြန်ကယ်လို့​ရအောင်လည်း သုံးနိုင်ပါတယ်။ နံပါတ် (၃) ကတော့ Truck က (၂) ယောက်ထိုင်လို့ရတော့ သူနဲ့ Deckard Shaw တို့ နှစ်ကိုယ်ကြားဖြေရှင်းစရာရှိတာတွေ အဲ့ထဲမှာ ဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်။ ကားတွေနဲ့တိုက်ပြီး ဘယ်သူက အသက်ရှင်ကျန်လဲ ဆိုတာလဲ စမ်းနိုင်ပါတယ်။ သေသွားတဲ့ သူကို နောက်ကတင်လို့ရတာပေါ့နော်။
Tu Tu Car
ဒီ Tu Tu ကားကတော့ Tego Leo နဲ့ သူ့ သူငယ်ချင်း Rico Santos တို့ အတွက် သေချာလုပ်ပေးထားတာပါ။ Tego က မောင်းပြီး Rick က နောက်မှာ ထိုင်စီးလို့ရတာပေါ့။ အမြဲ ပျော်ပျော်နေတတ်တဲ့ ဒီအတွဲရဲ့အကျင့်ကတော့ ဒီလို အလှဆင်ထားတဲ့ Tu Tu နဲ့ ကကွက်တိဘဲ။ ကားလိုစင်မရှိတာကလွဲလို့ တစ်ခြား ဘာအမှားဖြစ်စရာရှိအုန်းမလဲလေနော်။
ပြီးတော့ Dom နဲ့ Letty တို့ Bermuda က Clock Tower နားမှာ သံသယအဝင်မခံရဘဲ အေးဆေးအလုပ်လုပ်ဖို့ကားလိုရင် Tu Tu ကတော့ ကွက်တိပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် ရန်သူတွေစီကပြေးဖို့ Tu Tu တစ်စီးဘဲ ရွေးစရာရှိတော့တယ်ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ခြေထောက်ကိုသုံးပြီးတော့သာ ပြေးပါ။ ကားကိုသုံးမနေပါနဲ့။
အမြင့်ဆုံး အရှိန် : 100 km/h
ဒါကတော့ အထူးဖော်ပြချက်ပါ။ တစ်ချိန်လုံး လက်ထောက်အနေနဲ့ပဲလိုက်နေရတာ ပျင်းစရာအကောင်းသား။ ။ နည်းပညာမှတော်တဲ့သူတစ်ယောက်အတွက်တော့ ရေထဲမှာရော ကုန်းပေါ်မှာပါစီးလို့ရတဲ့ ဒီ Convertible ကားကိုသုံးရတာ သိပ်တော့မခက်ခဲပါဘူး။
ဒါလေးက (၂) ယောက်စီးဆိုတော့ Ramsey က Tej နဲ့ အတူ အဖော်လိုက်စီးလို့ရတောပေါ့။ နောက်ဆုံး Death Circle က ထွက်ပြေးလို့ မရတော့ဘူးထင်ရင်တော့ Ramsey အနစ်နာခံပြီး ကားပေါ်ကနေခုန်ချပြီး သူရဲကောင်းလုပ်နိုင်မှာပါ။
*Image credits to Garena Free Fire
Codashop မှာဘဲ Free Fire စိန်ဝယ်ဖို့ မမေ့ပါနဲ့နော်။ ကျွန်ုပ်တို့ဆီမှာ စိတ်ချလွယ်ကူပြီး မြန်ဆန်တဲ့ ငွေပေးချေမှု စနစ်အမျိုးမျိုးနဲ့ ပေးချေနိုင်ပါတယ်။
Previous articleWild Rift Patch 2.4 ရဲ့ အလန်းဆုံးလုပ်ဆောင်ချက်များ : ချန်ပီယံနှင့် ပစ္စည်းအသစ်များ၊ Wild Pass S2, Ban ခြင်းနှင့် အခြားအကြောင်းအရာများစွာ
Next articleVALORANT Agents တွေနဲ့ သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်များ